အစေခံကဖေးပြီးတော့ အတူတူအိပ်လို့ရတဲ့ကဖေး ? - JAPO Japanese News
ဂါ 26 May 2020, 10:45 မနက်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ otaku ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုအနေဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် အတော်အတန်ကျော်ကြားလာတဲ့ အစေခံကဖေး။
ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက အစေခံတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး သင့်ကိုကြိုဆိုပေးပါလိမ့်မယ်။
တိုကျိုရှိ Akihabara၊ Osaka ရှိ Nihonbashi တို့မှာဆိုရင် Otaku တွေစုဝေးတဲ့မြို့အဖြစ် မြင်တွေ့နိုင်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင် ဒီနေရာတွေကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေတော်တော်များပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝစိတ်မဝင်စားပေမယ့် မြင်နေ၊ တွေ့နေ၊ ကြားနေရတာဖြစ်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။အသစ်တဖန် ရေပန်းစားလာပြန်တဲ့ အရာကတော့ အတူတူအိပ်လို့ရတဲ့ ကဖေး။အတူတူအိပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ စာဖတ်သူတွေ ကတော့ ဘယ်လိုစိတ်ကူးပြီးတွေးမိကြသလဲ?
နည်းနည်း မသင်္ကာစရာ လုပ်ငန်းများဖြစ်နေမလား?
လို့ တွေးမိစေပေမယ့် စာဖတ်သူတွေရော ဘယ်လိုကဖေးလို့ ပုံဖော်မိလဲ ?
ဒီနာမည်မှာ “ ကဖေး” ဆိုတာပါလို့
လူအများစုကတော့ ဒီဟာက အစေခံကဖေးဆိုင်တစ်မျိုးဖြစ်မယ်လို့ ထင်ရစေပေမယ့်
သို့သော် အတူတူအိပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကဖေးကိုတော့ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။တံခါးပိတ်အခန်းမှာ လှဲလျောင်းပြီးစကားပြောမယ်၊ အနှိပ်ခံဖို့သွားတဲ့ ဆိုင်တွေလိုမျိုးလိုပြောလိုရပါတယ်။ကဖေးလို့ဆိုတာထက် အနှိပ်ခန်းလို့ပြောရင်တောင်ပိုမှန်ဦးမလား ?
ဒါပေမယ့် အနှိပ်ခန်းဆိုတာက ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ပေးပြီး ငွေပေးချေရတဲ့ နေရာတွေကများပြားတာမို့ တကယ့်အခြေအနေက တဖြေးဖြေးပျောက်ကွယ်လာပါတယ်။ဆိုင်ရဲ့ အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး အခြေအနေတွေကမတူဘူးလို့ ထင်ရပေမယ့် ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ ဒီလိုဆိုင်မျိုးပါပဲ။
日本でしか味わえない、「Why Japanese People?」なカフェ13
ကုန်ကျမယ့်ငွေကတော့ မိနစ် ၃၀ အတွက် ယန်း ၃၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ ကြားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ ရွေးချယ်စရာတွေပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ပွေ့ဖက်ခြင်းကိုတော့ ပြုလုပ်လို့ရပြီး ( နမ်းခြင်း နှင့် ရင်ဘတ်ကိုထိခြင်း အားတားမြစ်ထားပါတယ်) ယန်း ၅၀၀၀နှိပ်ပေးခြင်း၊ ပေါင်ကိုခေါင်းအုံးခြင်း၊ နားကိုထိခြင်း စသည်တို့ကတော့ ယန်း ၁၀၀၀ ခန့်ကုန်ကျပါတယ်။
ထို့အပြင် ဆိုင်ရဲ့အပြင်ဘက်တွင် နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ခန့် Date မယ်ဆိုရင်တော့ ယန်း ၂၅၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် ရှိပါသေးတယ်။
အတူတူ ကာရာအိုကေသွားဆိုရင် (မိနစ် ၈၀) ယန်း ၁၄၀၀၀ရုပ်ရှင်ရုံကိုသွားရင် (မိနစ် ၂၀၀) ယန်း ၂၈၀၀၀တိုကျိုအတွင်းလျှောက်လည်ရင် (မိနစ် ၉၀) ယန်း ၁၂၀၀၀အပန်းဖြေဥယျာဉ်သွားရင် (၆ နာရီ) ယန်း ၅၀၀၀၀အစရှိသဖြင့် .. ..
ဒီအလုပ်အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက်တော့ ၀င်ငွေမြင့်မားစွာရရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ရပြီး။ အကယ်၍ လူကြိုက်များသူဖြစ်ပါက တစ်နာရီလျှင် ယန်း ၅၀၀၀ ရရှိဦးမှာတဲ့။
ဝယ်သူက ရုတ်တရက် နမ်းရှုပ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် စည်းကမ်းအတိုင်းနေပါ့မလား. . .ဒါတွေကိုတော့ အနည်းငယ်စိတ်ပူမိပါတယ်။
အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်ခဲ့သူအများစုရဲ့ ပြောပြချက်အရတော့ ဤကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များသောအခြေအနေကိုမတွေ့ပါဘူး လို့ပြောကြပါတယ်။အကယ်၍ ဆိုင်မှာ ဒီလို စည်းကမ်းမလိုက်နာရင် ဆိုင်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေ ရှိလို့ ချက်ချင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန် ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်ပြင်ပရှိသူများကဲ့သို့သော ရွေးချယ်စရာများကို သတ်မှတ်ထားပြီး မိန်းကလေးဘက်က မနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားရလျှင်လည်း ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။
cafe element လုံးဝမရှိသော်လည်း နာမည်ကို cafe တစ်ခုထည့်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကိုလွယ်ကူစွာခံစားစေပါတယ်။ဒီနာမည်ပေးလိုက်တဲ့သူကအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်နော်။ .. ..
ထို့အပြင်၎င်းသည် သူတို့၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအလုပ်ပြီးနောက်၌ပင် ထပ်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများအကြားမှာတော့ အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ အချိန်ပိုင်းအလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပုံရပါတယ်။
ဂျပန်ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာ အထီးကျန်တဲ့သူတွေ တိုးပွားလာတဲ့ပုံပါပဲ။
သင်ရော . . .သွားချင်လား ?
မုန်တိုင်းနံပါတ် (၈)၊ ၂၄ ရက်နေ့မှာ အိုကီနာဝါကျွန်းမကြီးနဲ့ Amami သို့ချည်းကပ်လာပြီးဟုခန့်မှန်းရ !!!!!!